Fantaro i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien), hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 5 ka hatramin’ny 11 Novambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2019 3:14 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Italiano, English
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Tuhi Martukaw (Jocelyn Ting-Hui Hung Chien) (@JocelynJinumuTW) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Vehivavy teratany avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kasavakan ao amin'ny Vahoaka Pinuyumayan any Taiwan aho. Izaho no mpandrindra sy mpanorina ny Vondron'asan'ny Tanora Indizeny Taiwan LIMA amin'izao fotoana izao, sady mpanao gazety no mpikaroka mahaleo tena, ary manohy ny fianarana Ph.D amin'ny fandalinana ny serasera ihany koa. Mpiaro ny zon'ny teratany mavitrika amin'ny ambaratonga rehetra aho.
Nosokajian'ny UNESCO ho fiteny tandindonin-doza ny fiteny Pinuyumayan. Olona vitsivitsy izay efa 50 taona mahery ihany no mahay miteny sy mampiasa ilay fiteny amin'ny andavanandro, raha vitsy kosa ny tanora no mahay miteny izany fiteny izany.